Messi oo maanta baaritaan mari doona ka dib dhaawicii xalay. - Caasimada Online
Home Warar Messi oo maanta baaritaan mari doona ka dib dhaawicii xalay.
Messi oo maanta baaritaan mari doona ka dib dhaawicii xalay.
Lionel Messi ayaa mari doona tijaabo caafimaad ka dib markii dhaawac jilibka ah looga saaray kulankii goolal la’aata ku idlaaday oo ay kooxdiisa Barcelona xalay la ciyaartay Benfica.kooxda ka dhisan Catalan ayaana xaqiijisay inuusan dhaawac daran soo gaarin.
Tababare Tito Vilanova ayaan ciyaarta kusoo bilaabin kabtanka Argentine kulankii kama dambeysta Group-ka ee Champions League, balse waxaa bedel lagu keenay ciyaarta oo ay ka harsan tahay 13 daqiiqo markii lagu bedelay Rafinha,xilli ay Blaugrana guul doon aheyd.
Laakiin ciyaarta oo ay ka harsan tahay shan daqiiqo, welina aan gool la iska dhalin, ayuu ciyaaryahanka ugu cadcad Ballon d’Or ka dhaawacmay jilibka lugtiisa bidix, ka dib markii ay isku dheceen goolhayaha Eagles Artur.
“Ma ahan wax fiican in la arko Lionel Messi oo ku baxaya Bareelo,” ayuu agaasimaha kooxda Barca Andoni Zubizarette u sheegay Canal Plus.